Ity ny safidinay sceneries kalitao tsara indrindra ho an'ny Microsoft Flight Simulator X (misy kinova) ary Prepar3D hatramin'ny v5. Hanatsorana ny fametrahana ny add-ons fampidinana tsirairay dia miaraka amin'ny installer mandeha ho azy. Misafidiana iray amin'ireo sokajy hanombohana ny fisintomanao.
Safidio ny seranam-piaramanidina tianao na ny tanàna tianao haleha. Manana ny toerana sasany tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao izahay amin'ny sidina VFR
Fampidinana rehetra ho an'ny Prepar3D FSX - SCENERY
VFR Balice Polonina FSX & P3D
Noforonina 11 Mar 2020
Nohavaozina taminy 11 Mar 2020
Ity misy toerana mahafinaritra amin'ny "VFR Balice Extension I" (kinova 1.2) izay maneho ny tanànan'i Kraków (EPKK) taloha sy ny vohitra Balice (Polonina). Miaraka amin'ny zavatra 3D be pitsiny sy tsangambato ary koa fanatsarana endrika alina. Fonosana feno miaraka amin'ny tany misy azy, sary mihetsika, fifamoivoizana sy ny sambo.
Nosoratan'i Lotar Tomczyk, Jakub Mista
Noforonina 1 Feb 2020
Nohavaozina taminy 9 Feb 2020
Faly izahay fa izy no voalohany nanome ity toerana ity ho an'ny mpanakanto manerana an'izao tontolo izao, ary misaotra ny mpamorona azy Maher Souriti (PRO Simulation) izahay noho ny fahatokisana napetraka tao Rikoooo hizara ny asany noforonina tamin'ny lisansa Freeware.
Noforonina 11 Oct 2019
Nohavaozina taminy 11 Oct 2019
Ity seho amin'ny antsipirihany ity sy ny velaran-javatra mahavariana dia mahasahana ny velaran'ny 14500 km km amin'ny endriny tena misy sary. Fa FSX Fananahana (na volamena), FSX Edam Edition Prepar3D v4. Ny famahana ny 1 m / piksel dia mitondra sary maranitra, eny akaikin'ny tany mihitsy aza. Mankasitraka indrindra amin'ny asa ambany sy miadana! Misy ihany koa ny vahaolana volan'ny 10 m.
Avy amin'i Scenery avy amin'i BlueSkyScenery. Fanampiny nataon'i Guy Diotte. Fanitsiana nataon'i Rikoooo
Noforonina 27 Jul 2019
Nohavaozina taminy 27 Jul 2019
Toerana tsara tarehy Prepar3D v4 - Saint Barthelemy. Famahana sary: ​​50 cm piksel. Fanapahan-kevitra mesh: 5 m ho sanda tsara. Autogen miaraka amin'ny Data OSM sy Scenproc. Nataon'i Patrick Dubois. Fametrahana mandeha ho azy.
Noforonina 10 Apr 2019
Nohavaozina taminy 11 Apr 2019
Indreto misy sehatra Freeware tanteraka eto Guadeloupe! Ity toerana tsara tarehy ity Prepar3D Ny v4 dia ampiarahin'ny auto-gen (ala sy ny trano fonenana) ary ny valin'ny 1m vahaolana, ary ny zavatra 3D sasany.
20 668 3.80 (10)
Ny sary malaza ao Portland (sary ICAO: KPDX) sy ny manodidina azy, ny manodidina dia mandrakotra ny 32,625 km kilaometatra avo lenta amin'ny 1m isaky ny pixel.
Nosoratan'i BlueSkyScenery (Gottfried Razek). AFCAD avy amin'i Joop Mak
Nohavaozina taminy 30 Aug 2019
Io sary goavambe io dia mandrakotra ny tanàna sy ny faritra rehetra misy azy. Ny fanapahan-kevitra dia iray amin'ireo toerana manodidina isaky ny metatra Pixel, tafiditra amin'ny 10m résolution tahirin-kevitra isam-ponina (volovolo).
Noforonina 1 Jun 2018
Nohavaozina taminy 3 Jun 2018
Io faritra io dia ahitana faritry Libanona manontolo miaraka amin'ny angona 1m / pix sy ny mesh LOD10 resolution metatra 33 (avy amin'ny FreeMesh X), tsy misy foto-drafitrasa alina ary fotoana iray monja.
Nosoratan'i FTXDes & FreeMesh X
29 266 4.75 (8)
Nohavaozina taminy 1 Mar 2018
Ity misy sary mahafinaritra tena misy eto Isiraely natolotry ny FTXDes izay manarona ny faritanin'i Isiraely, Palestine, Gaza ary ny Golan Heights. Ny famahana ny firafitr'ity sehatra ity dia "1m / pixel" mety indrindra amin'ny sidina VFR
Nosoratan'i FTXDes (sary photoreal), FreeMeshX 2.0 (Mesh), Stas Harchuk (Ben-Gurion Intl)
Noforonina 27 Oct 2017
Nohavaozina taminy 27 Oct 2017
Manonofy ve ianao hisidina VFR manerana an'i San Francisco toy ny any amin'ny tontolo tena izy? Azonao atao izao ny maka sary an-tsary tsara tarehy amin'ny 1m / pixel amin'ny metan'ny 10m.
49 206 3.60 (15)
Noforonina 8 Sep 2017
Tena sary lehibe tena misy ny 21 750 kilaometatra kilaometatra avo lenta 1m / pixel miaraka amin'ny 10m mesh manangona ny tanànan'i Las Vegas sy ny manodidina azy
32 513 3.50 (14)
Noforonina 19 May 2017
Nohavaozina taminy 31 Oct 2017
Very toerana tsara tarehy tsara sy ny tsipiriany ao amin'ny Channel Nosy, ahitana telo seranam-piaramanidina: Alderney (EGJA), Guernsey (EGJB) sy Jersey (EGJJ), sary-tena textures, maro voasakantsakan'ny fiara sy ny tsipiriany
Nosoratan'i Soarfly Concepts
Nohavaozina taminy 20 Nov 2017
Manarona ny faritr'i Kosovo manontolo ity sary-sary ity. Ampidirina amina vanim-potoana tokana izy io. Ny famahana ny firafitry ny tany dia 2 m / pixel. Fitsapana nosedraina ambanin'ny P3Dv3 ary miasa koa FSX.
Nosoratan'i FTXDes - Scenery misokatra amin'ny tetikasa
31 440 4.40 (5)
Noforonina 31 Mar 2017
Excellent sary-tena toerana tsara tarehy mampiseho ny tanànan'i Kiev any Okraina (sy ny manodidina) amin'ny seranam-piaramanidina telo
Nosoratan'i Stebel (avsimrus.com)
Noforonina 2 Mar 2017
Nohavaozina taminy 7 Nov 2017
Photo-zava-misy textures nandrakotra ny nosy manontolo, ny harato ny rehetra Gresy amin'ny fanapahan-kevitra LOD9 (76m) sy ny marina grika famaritana vaovao ny fari-taniny ka hatramin'ny tapatapaky ny Torkia.
Noforonina 20 Apr 2016
OFX Amerika Atsimo Evolution manome ho anareo ny zava-misy vaovao 10 M sy ny fametrahana mazava tsara harato feno landclass Amerika Atsimo nanarona 18.118.032 km², koa tafiditra tany Amerika Afovoany.
Noforonina 10 Oct 2015
Wide sary-tena HD toerana tsara tarehy (1m / Pixel) lehibe iray ampahany amin'ny fanjakan'i Washington (US) sy ny tapa-Oregon, ny toerana manodidina dia ahitana ny seranam-piaramanidina folowing KTDO, KCLS, KKLS sy KAST.
Noforonina 22 Jul 2015
Mega sary-tena tsara tarehy ny Los Angeles sy ny manodidina azy, vahaolana 1m / Pixel + isam-ponina harato 10m
Fampidinana: Pejy 1 amin'ny 3 Valiny 1 - 19 amin'ny 52